Ikhamera yaseKorea Hyundai ngoSepthemba 2010 yaqala imodeli yayo entsha, kamuva eyaba yithengisa kakhulu emakethe yethu - i-sedundai Solaris sedan. Imishini yakhe yobuchwepheshe yayithembisa. Ngaphansi konyaka, imoto yasungulwa ekukhiqizeni okuningi. Ngemva kwesikhashana, ukuze kube ngokuqondile ngo-2014, umzimba oqhekekile wabonakala emakethe. I-Hyundai Solaris 2014 entsha (ukubuyekezwa kwabanikazi bezimoto ngezansi) kwakuyisibonelo sokuthuthukiswa kwenkampani. Kwakusekelwe kwipulatifomu ebuyekeziwe, ngokungafani kakhulu nokuthuthukiswa okudlule kwe-automaker yaseKorea. Yaba yizwe lonke futhi yavumela inkampani ukuthi izuze ngokuthembekile ezimakethe eziningi zomhlaba.
Debut Hyundai Solaris 2014
E-Russia, i-Hyundai yaziwa ngaphambili. Imikhiqizo yenkampani yajabulela ukufunwa okujwayelekile. Kodwa-ke, lapho kuqala i-Hyundai Solaris 2014 (ukubuyekezwa kochwepheshe kuvunyelwe ukwenza izibikezelo ezithile), ukuthandwa kwanda futhi ukuthengisa kwanda kakhulu. Lokhu kwaqondiswa yizinto ezintsha ezazisetshenziselwa ukukhiqiza imoto. Babenjani? Okokuqala, lokhu kungumklamo wezinguquko. I-Hatchback ishintshe kakhulu ekubukeni. Futhi, ukunakwa okukhethekile kwakhokhelwa izinkomba zezobuchwepheshe, izinga elingakaze liduduze leli klasi kanye nemishini. Izinga eliphakeme lemishini lasivumela ukuba sithathe isikhundla esiphambili ezimakethe zomhlaba, kanye nokuzethemba ngokuzethemba ukuthi i-model entsha ye-Hyundai Solaris 2014. Impendulo evela kubanikazi mayelana ne-version yokubuyisela esiteji sokuqala yayinempilo kuphela, kwakungekho ukuhluleka okusobala.
Isikhathi sokukhululwa kwemoto emakethe sikhethwe kahle kakhulu - ukudayiswa ngaleso sikhathi eRussia kwakhula ngokuqinile, lokhu kwakungenxa yokuphuma kwezwe kusukela enkingeni. Konke lokhu kwaholela eqinisweni lokuthi i-hatchback kwadingeka ibe umholi ekuthengiseni ingxenye yayo.
Ngonyaka we-2014, lo modeli wawungumguquleli wezwe lethu futhi wabeka izindinganiso zenduduzo ekilasini lakhe. Ukuklanywa komzimba okusheshayo kwacaca ngokumelene nesizinda sezinye izimoto, okuqinisekiswa yizibuyekezo eziningi. I-Hyundai Solaris 2014 isizibonakalise ngokwazo hhayi kuphela ukuklama nenduduzo kuphela, kodwa futhi nezakhiwo eziphezulu zezinto eziphilayo, okwakhula ngokuphawulekayo ukuhamba kahle, ukuzinza kwemoto ngenkathi ushayela.
Isibonelo "Solaris" ngemuva kokubuyisela emuva cishe asizange sishintshe ngosayizi. Kunqunywe ukuthi ushiye i-wheelbase njengangaphambili, ubukhulu bayo buhambisana kahle ne-version ebuyekeziwe. Ngokuqondene nobude, lapha umkhiqizi wandisa umzimba kancane. Manje lilingana no-4120 mm. Ngesikhathi esifanayo, ububanzi abukathinti, futhi i-1700 mm evamile ishiywe. Ukuphakama nakho kwahlala ezingeni elifanayo futhi ku-1470 mm ku-Hyundai Solaris New 2014. Ukubuyekezwa kwabathandi bemoto kanye nochwepheshe kubonisa ukuthi lesi sombululo siphumelele kakhulu, njengoba imoto ibukeka ngokubili ngaphandle nangaphakathi. Umzuzwana owodwa ungabakhubaza abantu abavame ukugibela emgwaqweni, lokhu kungukuthi umhlabathi ungasetshenziswanga, futhi awuzange ushintshe - 160 mm. Abanikazi abaningi bathambekele ekukhanyeni kancane ukuze benze imoto yonke indawo yonke.
Amaphuzu avelele angaphandle
Manje kuyafaneleka ukucabangela lokho umkhiqizi waseKorea anikeza ekwakhiweni kwangaphandle komzimba we-Hyundai Solaris 2014. Ukubuyisela emuva (ukubuyekezwa kuvumela isiphetho esinjalo) akuyona into engaphandle, okuyinto ngokwazo eyabathokozisa kakhulu abashayeli, abacatshangelwe kahle. Zonke izakhi ezintsha zihlanganiswa ngaphandle kwendawo yangaphandle, futhi zanikeza izinto eziningi ezintsha.
Ngaphambi kwe-Hyundai kukhona i-chrome grille, iyunithi ye-optics ephathekayo, lapho i-LED egijima khona izibani ingaba khona , futhi engxenyeni engezansi kukhona izibani zombhobho. Le hood ifakwe ukushintshwa okushelelekile kuya kwamaphiko. Isixazululo salesi sakhiwo sanikeza imoto ubuduna, futhi kwakufana nokuthandwa kwabalandeli bama-exteriors ashukumisayo, okuqinisekiswa yizibuyekezo ezithunyelwe kumasayithi. I-Hyundai Solaris 2014 izophinde ijabulise ngezinketho ezengeziwe ze-windshield. Manje asikho isidingo sokukhathazeka ngezinga lokubonakala. Ngisho nesithwathwa esibi kunazo zonke, okuyinto evamile eRussia, ngeke iqede, njengoba kukhona ukushisa komkhawulo ohlangothini lwezingcwecwe. Imigqa yamaphiko ihamba ngokuvumelana nendawo eya emkhatsini wemoto.
Ngemuva kwe-Hyundai Solaris kukhona izibani ezikhanyayo ezisuka ophahleni kuze kufike emanzini. Umnyango wesigxobo semithwalo ukhululekile kakhulu. Izitobhi zitholakala phansi phansi kwe-bumper.
Yini elindelwe abashayeli kuleli chabini
Naphezu kokulingana okuncane, isitoreji sendawo yangaphakathi sikhulu ngokwanele futhi imoto ingabizwa ngokuthi ivulekile, futhi ubukhulu begumbi lomthwalo lihambisana nalokho okuncintisana kakhulu futhi kufana nesilinganiso. Umthamo wayo wama-370 amalitha ku-model Hyundai Solaris hatchback 2014. Ukubuyekezwa kubonisa ukunganaki nalezi zilinganiso. Abaningi bakholelwa ukuthi kule moto ungakwazi ukwandisa kancane ubukhulu be-trunk. Kodwa-ke, ngokumelene nesizinda sezinye izinzuzo, lokhu kungaphumeleli kungabizwa ngokuthi kunzima ngokwanele.
Ingaphakathi lemoto livulekile kakhulu, izinto zinekhwalithi enhle. Ikhwalithi yemhlangano isesimweni esiphakeme futhi ihlangabezana namazinga aseYurophu. Kuzo zonke izakhi zekhishi, ukugcizelela komkhiqizi kududuzwa kuzwakala. Kubaluleke kakhulu: i-Hyundai Solaris 2014 (ukubuyekezwa kwabanikazi ukuqinisekiswa kwaleli qiniso) kuqoqwe kwezobuchwepheshe banamuhla, ngakho-ke izikhala phakathi kwamapaneli womzimba nezingxenye zangaphakathi zinesiphakamiso esifanayo.
Umshayeli nabagibeli bathola injabulo enkulu ezihlalweni. Idizayini yabo inephrofayela ekhululekile, ukwesekwa okumangalisayo kwe-lateral, kanye nenani elikhulu lezinguquko. Ngenxa yalesi sinqumo, abantu, cishe noma yikuphi ukukhanya, bazokwazi ukuhambisana kahle esihlalweni. Izihlalo zangemuva zangemuva zihlala kahle nabantu abadala abathathu abazozizwa bengakhululekile ngesikhathi sokunyakaza.
Ngokuhamba phambili, imoto ibhekene nokuziphatha okuqhubekayo kunoma iyiphi indawo yomgwaqo, lokhu sekuvele kuhlolwe ngabashayeli abaningi abashiye impendulo yabo. I-Hyundai Solaris 2014 ifakwe ukumiswa kwekhwalithi. Ikuvumela ukuthi unqobe ngokuzethemba izithiyo ezihlukahlukene emgwaqweni. Ngejubane elikhulu akukho "umkhumbi". Imoto iziphatha ngokuzethemba ngenxa yokuthi abakhiqizi bacatshangwa kahle ngemishini yobuchwepheshe. I-hatchback ayidingi ukuba idonswe. Ngaphenduka, ukuziphatha kubikezelwa, umshayeli angazizwa kunesiphi isimo.
Izici ze-unit unit
Ngokwemibono yobuchwepheshe, abashayeli abathandekayo abajabuli kakhulu. Ngeshwa, ngeke bathole izinjini ezintsha lapha. Abaqambi baseKorea banquma ukukhetha izinyunithi zakudala ezivivinyelwe.
Ngakho-ke, lokho esikubona kumodeli entsha. Ukunyakaza kunikelwa yizinjini zeGamma MPI uhlobo oluthile lwe-1.4 no-1.6 amalitha. Amandla amayunithi avela ku-107 kuya ku-123 amalitha. Nge. Ukufakwa kwe-four-cylinder, ku-inthanethi. I-GРМ DOHC - i-valves engu-16. Zinezinhlobo ezimbili zokudluliselwa: owokuqala - umshini (izinyathelo ezingu-5), okwesibili - i-othomathikhi ezine-speed. Imodi yokusheshisa ifana ne-sedan yemodeli efanayo. I-MKPP ikuvumela ukuthi uzuze isivinini sezinyawo ezingu-11.5, ukuthutha okuzenzakalelayo - imizuzwana engu-13.4. Amathuba "omshini othomathikhi" asuke ebi kakhulu, isibonelo, isivinini esiphezulu siyeka ngaphakathi kwe-170 km / h, lapho umshini uzosheshisa ku-190 km / h. Ukusetshenziswa kwamagesi kunomnotho. Ngakho, isibonelo, edolobheni kuzothatha ama-7.5-8.5 amalitha ukuhambisa eHyundai Solaris 2014. Ukubuyekezwa kwabashayeli kubonisa ukuthi emjikelezweni ohlangene imoto ichitha cishe amalitha ayisithupha.
Kuye ngokucushwa kwe-Hyundai Solaris, ukulawulwa kwesimo sezulu, i-ESP nekhamera yokubukela yangemuva, isondo elishisayo kanye nezihlalo zangaphambili, amasondo alloy, ama-parktronics nezinye izinketho ezingenza ukushayela kube lula kakhulu.
I-hatchback ibonakala ngezinga eliphakeme lokuphepha. Lokhu kuhlinzekwa yi-ABS yokusatshalaliswa kwamandla kagesi kanye ne-ESP. Futhi ekusetshenzisweni okuyisisekelo kunama-airbags angu-2, kwabanye inombolo yabo inganyuka ibe yi-4. Phakathi nokuhlolwa okuzimele imoto ibonise imiphumela emihle kakhulu ekuqhumeni, okuyinto eyodwa yezinto ezibaluleke kakhulu.
Ekuphetheni, kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi imodeli entsha iyona engcono kakhulu emakethe yemoto yaseRussia, okuqinisekiswa yizibuyekezo eziningi. U-Hyundai Solaris 2014 usebenza njengomholi wokuthengisa futhi ujabulela uthando lwabantu.
Indlela yokuhlanza ukuzibopha
Kungani ungesabi izimoto nokuzibona ukuphathwa?
Kanjani ukuhlola ezingeni uwoyela kuleli automatic transmission? Namafutha omoya othomathikhi. Dipstick ukuhlola ezingeni uwoyela
Model "Lada" - umlando ezifuywayo auto umkhakha
Cishe 'Valtrex': umhlahlandlela emfushane for iziguli
Ventral hernia: izimpawu kanye nokwelashwa
Tarragon imbiza njengoba spice elimnandi
Rocker ngezandla zakhe. Bedlalela perch ngezandla zabo. Unhooked ukulinganisela phakathi kwemithwalo yakho izandla zabo
"Stealth umshayeli 710 '- compact futhi ngamandla
E-Italy, eNaples. Yini ukubona eNaples? amahhotela Naples
The yokungcebeleka edolobhaneni Divnomorskoye. Izibuyekezo zezivakashi